mafuta anopisa kudya
Kwete Nonsense Mwenzira Yokurasira 40 Makirogiramu Mwedzi!
Iwe unoziva chinonyatsotitungamirira ini kumadziro? Ndiri kureva, zvinonditungamirira zvachose nutswe zuva nezuva? Pose pandinoenda kuchitoro, mall, mafirimu, gungwa ... Zvikuru, KUNYAKA ...
Saka vanhu vazhinji ini ndinoona mazuva ano inonyanyisa kukura ...
Mwedzi kana mazuva mashoma kubva pakukura kwechirwere cheshuga kana zvimwe zvinhu zvinotyisa zvine chokuita nehutano.
Kana ndiri kukugumbusa iwe nokutaura izvi, handisi HERE urombo ... Uye ini ndinogona kuvimbisa, ndichaenda kukunyengedza iwe kana iwe uchiramba uchiverenga ...
Asi kana iwe uwandisa kupfuura ikozvino ... nechinguva, kana zvakawanda ... iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya nokuti ini ndichagoverana newe imwe yeird, fat melting secrets iyo inoshanda zvinoita pakarepo ...
Kutanga manheru ano ...
Kunyungudutsa mapaundi ako ewedzi uye yakaipa ruvara kunze kwekuti iwe urega kudya zvamunoda, kana kupedza chiuno chako pajimini.
Asi kutanga, ndinofanira kukanda vamwe vanhu kubva peji ino avo HAVASI vari pano.
Zvandiri kugoverana newe hazvisi zvemasimba ...
Hazvisi zvezvigaro zvezvematongerwo enyika-yakarurama uye Social Justice Warriors vanoti "Big Big Beautiful," uye vanoti iwe unogona kuva wakagwinya uye unofadza kunyange iwe uri pedyo nekuderedza kufa kubva pakukwirira ...
Uye izvi hazvisi zvevanhu vanodhakwa zvakare ku-Facebook uye chokwadi cheTV uye vanotarisa iyi pfupi pfupi, iyo inogona kuchinja hupenyu hwako mumaminitsi mashomanana anotevera.
Saka kana uri umwe we THEM, unogona kuvhara peji ino ikozvino ...
Asi ini ndinogona kuvimbisa, kana iwe uchindipa maminetsi matanhatu ezuva rako ...
Uye kana iwe usiri WEMWE slug uyo anotendeseka akatenda iwe uri "hutano" nekuraira Diet Coke pamwe newaini yako cheeseburger, huru fries uye pie pie ...
Zvadaro mumwe weird fat anonyengedza Ndiri kuda kugoverana newe UCHICHISHA hupenyu hwako ...
Ichi ndicho chivimbiso changu kwauri:
Usaita chisina kukanganisa, iwe uchakwanisa kuona mhinduro inooneka mumazuva manomwe.
Hungu, iwe unotora mhinduro FAST mukati pevhiki. Uye kana ukaramba uripo, iwe uchakwanisa kurasikirwa nyore nyore pamapuraundi makumi mana pamwedzi uye kumuka mangwanani oga oga KUCHINGA nesimba, simba uye kuvimba.
Zviuru zvangu zvevadzidzi vanogutsikana zvakapoteredza nyika ... varume nevakadzi vezera rose ... ndidane ini "Hapana Nonsense Ted."
Chaizvoizvo, hezvino izvo vamwe vavo vanofanira kutaura:
Sezvaunogona kuona izvi, zvinoshanda uye ini handiri pano BS iwe ...
Uye ini handiri pano kuti ndizadzise musoro wako neusina maturo kuti $ 60 mabhiriyoni ekurasikirwa kwemugadziri, uye avo vanogadzirisa hurumende mune zvinyorwa zvese, vave vachikuudza kubva pauri mwana ...
Nezvamunoda chaizvo kuita, kusvibisa mafuta ako nenzira iri nyore ...
Uye gadzira chiuno chako chisina kubhadhara mumhino pamapiritsi avo, kushandisa mashizha, mabhuku ezvokudya, "mafuta ane mafuta" uye "kudya" sodas, uye miitiro yekushanda iyo nguva dzose vanhu vakaita sewe neni hatizombofi takanamatira.
Ini ndiri kuda kukurova iwe nechokwadi-chisina maturo ... asi kana ukagona kuchibata, uye kana ukaramba uchiona, ndinovimbisa kuti ndichakuzivisa iwe mafuta anonyengedza okunyengedza avo avo vanotenda havadi kuti iwe uzive nezvazvo.
Kunyanya kune avo vanokanganisa muminiti (Ndinopikira zvandiri kuda kukuudza pamusoro peZVAIYO "purogiramu" yehupfumi hwekushambadzira hurumende inotyisa uye inokushungurudza) ...
Asi ini ndinoda kuti iwe uzive, kana iwe uri kunyanya kuwandisa iye zvino, ndine BIT yetsitsi kwauri ... nokuti kwete nguva refu yapfuura, ndakanga ndisiri mafuta chete. Ndakanga ndiri HUGE.
Pandakaenda kuna McDonalds, vaifanira kudana Burger King kuti vaite basa ...
Asi kana ndikagumburwa pane imwe yakashata yakanyanyisa- famba ini ndaizokuratidza, zvakangoerekana zvava EASY kuti ndidonhe 10 ... 20 ... 50 ... uye makumi zana ...
Muna 100% yakachengeteka, yakagadzikana, yakajeka uye yose-yakasikwa nzira.
Asi kusiyana ne "kunzwa zvakanaka" vanhu vanokuudza kuti "usava nehanya nevavengi" uye "kungozvikudza" wehukuru hwako, ndiri pano kuti ndikuudze chokwadi chechiitiko nenzira isina maturo zvinogona kukuvadza manzwiro ako zvishoma munguva pfupi ...
Asi uchaitawo kuti iwe usvibise mafuta ako, sechidimbu chemafuta muhari inopisa inopisa.
Kana uchinge wawana imwe yemafuta yakashata yakanyunguduka Ndiri kukuudza muminiti, ichidonha 15 ... 30 ... kunyange 50 kana 100 mapaundi ndiyo EASY.
Uye zvose zvandinoenda kuzokuudza muhurukuro pfupi iyi zvinotsigirwa neuchapupu husinganzwisisiki. Ingotarisa vamwe vevadzidzi vangu:
Mumwe nomumwe wavo akashandisa imwe yemafuta yakanyunguduka yakanyunguduka iyo ini ndiri kuda kukupa.
Nhasi, nekuda kwechakavanzika chandichakugovana newe, ini nevadzidzi vangu ini hatisi tetepa ... tiri kupenya nehutano, simba uye hutano, kutarisa uye kunzwa ... MAKORE vaduku kupfuura makore edu ...
Uye ikozvino, tine makore akawanda anofara uye ane utano kwemakore uye makumi emakore kutarisa mberi kune vadikanwa vedu.
Ingozviziva izvi: Kunyengedza kwandinoti ndikuratidze iwe kuchanyunguduka pane mamwe maundi mapaundi FAST, iyo iri nyore uye yakasikwa nenzira ...
Asi ini ndisina nguva yekufunganya pamusoro pehupenyu hwako kana manzwiro.
Ini ndinongotarisira kuti ndikuwanei mhinduro.
Nokuti izvo zvandinoenda kukuratidzira zvachose, pasina mubvunzo zvinoshanda ...
Uye hazvina basa kana iwe uchida kurasikirwa zana mapaundi kuti uponese hupenyu hwako, kana kurasikirwa mapaundi gumi kuti uwane muhomwe yako yemuchato ...
Hazvina mhosva kana uri murume kana mukadzi ...
Hazvina basa kuti wakare kana muduku sei iwe ...
Hazvina basa kana iwe uchibva kumhuri ye "big boned" vanhu ...
Uye hazvibatsiri kunyange kana iwe uine usimbe.
Nokuti izvo zvandinoenda kukuratidza iwe zvinovimbiswa kuita basa rakazara .
Hapana mubvunzo pamusoro pazvo.
Uye ndakakuudza here kuti inoshanda FAST?
Ichakutora zvigumisiro zvakavimbiswa mumazuva makumi matatu, uye kune vamwe vanhu, zvinotora zvishoma kudarika vhiki kuti zvione zvigaro mugirazi.
Yup, ndiri kutaura nezvekuwana mhinduro dzinooneka mukati me7 mazuva anobuda.
Chimbofungidzira iwe mazuva manomwe kubva zvino ...
Kukwira, kuwedzera pachiyero, nekuona nhamba kuenda KUNA kuchinja.
Ndiudze kuti izvi hazvingakuregi kuti ufare kwenguva yose ...
Uye iyi imwe yeird mafuta inonyengera inoshanda kunyange kana iwe uri simbe ...
Nokuti chokwadi ndechekuti iwe hauna mafuta nekuti iwe une usimbe, kana iwe unodya nenzira yakawandisa ...
Zvichida kwete nokuti une dambudziko rehutano, kana ...
Zvichida kwete nokuti une "mafupa makuru ..."
Uye ini ndinonyanya kusava nechokwadi nokuda kwehumwe hutano huripo huri huno husingazivi.
Nhau dzakanaka ndechokuti ndine nzira yakanakisisa uye isina simba kuti iwe urasire ZVA dzose dzepaundi mapaundi, uwane maitiro, uye pakupedzisira uwane simba zvakare ...
Yakagadzirirwa zvakananga vanhu vasingadi kushaya nzara ivo pachavo pane zvimwe zvokudya zvinosuruvarisa ...
Dzokera kuzvikoro zvekurovedza nokuda kwekugadzirisa kushanda ...
Kana kuti uite chero chinhu chipi zvacho chichaita kuti utadze mararamiro ako.
Chakavanzika chandinenge ndava kuda kukuzivisa iwe chinodikanwa kushanda zero ...
Uye ndinoziva kuti wakagadzirira, nokuti kana uri kutarisa mharidzo iyi, unoziva iwe uri mafuta uye iwe unoda kuti izvi zvishanduke.
Iwe unofara nemanyepo uye BS iwe wave wakadyidzwa kuhupenyu hwako hwose, zvichiita kuti iwe ugare uchinyora pamapera.
Iwe unogonawo kunge uri kurwara uye wakaneta nekushandisa zvikonzero kuti uedze kuratidza kuti sei dumbu rako rinowanikwa gore negore.
Pari zvino, masangano ekumadokero ari kutambura nechirwere chekurema.
Asi ivo "vanonzwa zvakanaka" vanachiremba uye gurus vari kutaura nezvevanhu vari "mafuta" sePoriyo yavo isina chinhu kana chimwe chinhu ...
Sezvo kana chiri chinhu chatinoberekwa nacho, uye hatigoni kuita chero chinhu.
Ndiyo musiyano pakati peizvi "kunzwa zvakanaka" vanachiremba neni ...
Havadi "kukuvadza manzwiro enyu" ...
kwete nonsense ted
nzira yakanakisisa yekurasikirwa nehutemi
Ini? Handina hanya.
Basa rangu nderokukubatsira kuti uremerwe uremu, uye ndakauya nenzira yakanakisisa yekunyungudutsa mafuta ako , kunyange iwe uchivenga kudya uye kurovedza muviri sezvandakaita ini ...
Uye kana uchangobva kushandisa tsvina iyi nhasi , maundi mapaundi uye unotarisa futi iwe unotakura zvakapoteredza uchatanga kuparara.
Pane chimwe chikonzero nei ndichikupai izvo zvakananga ...
Pane kuwirirana kwakananga pakati pekuva mafuta uye nekuvandudza zvirwere zvinotyisa.
Waizviziva here kuti pound imwe neimwe iwe uri kunyanyisa, inowedzera mikana yekuwana zvirwere zvinokuvadza zvakadai seshuga, high cholesterol, nehutachiona hwe3%?
Saka kana uri kunyanya kuwandisa nemapiritsi gumi chete, izvo zvinoreva iwe uri 30% mukana wekuwedzera chimwe chinhu chakaipa.
Ngatitendesei, ingani mapaundi ekurema kuri iwe?
Chinokosha ndechokuti, mafuta ariwe, iwe unowedzera kufa nekuda kwayo.
Uye uvimba neni, hapana anoziva zvakawanda pamusoro peizvi kupfuura ini. Munoona, ivo havana kundiidza nguva dzose "Hapana Nonsense Ted." Kuna amai vangu, ndaive "Teddy Bear" ... mwana wake, cuddly mukomana muduku ... amai vangu nababa ndivo zvaunodana "big boned," zvakare , saka vakangondiona sechinhu chakanaka ...
Asi vana kuchikoro, vaine mamwe mazita kwandiri ... mazita ane utsinye, anotyisa ...
Ndinoyeuka ndichivanza mumvura panguva yejimini, kana kuenda kune mukoti wechikoro uye ndichiita chimwe kukuvadza, kuti ndirege kunyadziswa kwekusagona kukwira kumusoro, kana kugara kumusoro, kana kuvhara jira rimwe chete pedyo nepanzira ...
Icho chakanyanya kuitika apo taitamba kickball. Handimbofi ndakakanganwa kunyadziswa kunopisa kwandainzwa ndimire ipapo ndichimirira kuti ndiwane imwe yezvikwata ...
Freddy Bavaro, mutambi akakurumbira mukirasi yangu uye mhirizhonga akaipa, aigara ari mumwe we "team captains ..."
Uye munhu wose aiziva "Tubby Ted" yaizova yekupedzisira yakasarudzwa. Kunyangwe chero boka rakapera neni, vamwe vana vaizonyunyuta pamusoro pekutamba ne "mafuta mbongoro ..."
Ndainzwa ndisingabatsiri ... izvo zvakandigonesa kuti ndirege kudzivirira mitambo uye kushandiswa zvakakwana, uye ndinodonhedzera kusuruvara kwangu mune junk zvokudya uye shuga sodas.
Izvi zvakaenderera mberi kuburikidza neyunivhesiti uye muupenyu hwangu hwevanhu vakuru.
Ndinofara kuti ndaiva nemudzimai wangu ane rudo Darlene, uye vana vedu vaviri vakanaka ... Darlene ainetseka nekuremera kwake muupenyu hwake hwose, zvakare, ndiyo iyo yatakabatanidzwa pakutanga ...
Pane dzimwe nguva apo isu tose takaenderera mberi tichidya zvokudya, kana kuti takabatana, kana kutora basa rekuedza kuderedza uremu ...
Asi kuedza uku kwaigara kuripo kwenguva pfupi. Chero mapepa mapepa Darlene neni takakwanisa kurasikirwa taizouya nekudzokorora kumashure kwenguva pfupi, uye ini ndingadai ndakarema kupfuura kare kare ...
Ndiri kuyeuka kuunza mhuri yangu kune paki yekunakidza yekakomana kangu kechipiri yepfumbamwe. Akanga achirota kuti akatasva bhiza rinotora kwemwedzi ...
Asi pandainge ndisina mafuta kuti ndikwanise kuisa bhandi rakapoteredza chiuno changu, vakandiudza kuti ndakanga ndisingakwanisi kuenda, sezvo mwanakomana wangu aisagona.
Akachema kwose kuenda kumba ... uye ndakanga ndichidzivirira misodzi yangu. Misodzi yezvinonyadzisa ...
Asi kana iwe uchifunga kuti zvakashata, hazvina zvazvakaenzaniswa nezvakaitika pachikoro changu chekusekondari chegore rapera ...
Ndingadai ndakapedza zuva iroro ndine chirwere chekugadzira chirwere chisina anesthesia, asi Darlene neni takanga tine chikoro chesekondari chechikoro ... ndiyo nzira yatakatanga kusangana nayo ...
Uye iye aida kuona vamwe vaaidzidza navo vezera rake, saka ndakashamisika kuenda naye ...
Yaiva pikini yekunze kunze kwezuva rinopisa-kupisa munaJuly. Ikoko ndaiva, ndakaputika senguruve, ndakagara pane imwe yezvinyorwa-zvine aluminium zvisikwa zvigaro ...
Kunyora chiso changu nekaputa rakazara nezvokudya zvekudya pamimba yangu, apo vekare vandaidzidza navo vakamira vakakomba chatting ...
Murondedzeri wangu wekare Freddy Bavaro akanga akamira pamusoro petafura yebhokisi. Ndakamubata ziso achindiputira nechinyunyuti pachiso chake, uye achinyengedza chimwe chinhu kumudzimai wake ... ndiyo yakanga iri iyo sneer iyo yaigara ichindipa ini pose apo "mafuta emombe" akazouraya boka rake re kickball ... Pakarepo kamwe, ndakanzwa kurira kwezwi ... the sound of metal bending ...
Uye zvakare, SNAP!
Makumbo echigaro changu akavhurika semasoppicks, uye ndakawira pasi sezvakaita saga guru rekuputika. Sketi yangu yakazara spaghetti uye mbatatari saladi, uye mukombe wangu weJumbo-yakasimwa doro, yakashambadza yose pamusoro pangu ... zvisinei kuti zvakaoma sei pandakatambura, handina kukwanisa kuzvisimudza. Ndaifamba-famba-svetuka se-beached whale ...
Ndainzwa LAUGHTER akandipoteredza ... kamwe kamwe ndakanga ndichitsvaira kumashure gym ...
Hakuna munhu akatamisa musuru kuti andibatsire, kusvikira Darlene achikurumidza uye akandibatsira kudzokera kumakumbo angu. Mushure mekunge akandibatsira kuti ndichenese, takaenda kumusha. Asi kunyadziswa kwakaipisisa kwoupenyu hwangu kwakanga kwachangotanga!
Freddy Bavaro akanyora chiitiko chose chakaipa pafoni yake ... uye akaiisa pa YouTube ...
Yakaenda "yehutachiona" usiku hwose, uye yakagoverwa pa Facebook ne 11,576 vanhu.
Ndakaona Muvhuro unotevera mangwanani, pandakanga ndakagara mu cubicle yangu uye ndakaona boka revashandi vandaishanda navo vakamira vakakomberedza kombiyuta uye vachiseka kuseka kwavo ...
Uye kufungidzira pa ...
Ndakasimuka, ndakashandura pamusoro pavo, ndikazviona ndiri pachikanda ... ndakatarirwa panzvimbo ine uswa nechiso chakazara spaghetti ...
Ndakasundira kunze uye ndakadhura vhidhiyo kubva pakutanga ...
Uye ikoko ndaiva, ndichidonhera pasi pikiniki, apo Freddy akandifananidza ... achitaura seaive achitaura imwe video ye National Geographic ...
"Heino Nyika Whale munzvimbo yake yepanyika, ichiisa chiso chake chinonyangadza pamutsotsi"
Izvo zvose majee, kutuka, nekunyadziswa kwekare zvangu zvakashanyira kumashure kwandiri. Ndinoyeuka kunzwa sokunge ndangoda kunyura mune imwe nzvimbo yakadzama, murima uye ndikafa ...
Chero iyo ... kana kudya pizza. Ndizvo chaizvo zvandakaita.
Zvinosuruvarisa sei kuti ndinofanira kunge ndakatarisa ... ndakagara ndoga mune imwe gorosi girasi, ndichivhara pasi imwe huru-pie nezvose zvigunwe, asi ini ndakanyorovesa maziso angu ...
Uye mazuva mashomanana gare gare, pandakazoongorora kurapwa kwegore negore, ndakatarisana nechiso nekuziva kuti kurema kwangu kwakanga kusingondigadziri chinhu chinoseka paInternet ...
Yakanga iri kundiuraya ini
Chiremba wangu akazondiudza ini neHigh Blood Pressure uye ndikaridza chirwere chechirwere cheshuga, uye akandipa nyevero yekuti ndaifanira kuva nekurohwa kana kurwadziwa kwemoyo chero nguva, kunze kwekuti ndakarashika anenge mapaundi zana.
Akanyora zvinyorwa zvemazana emishonga yakasiyana, uye akandituma kuddling kubva ...
Iye zvino, izvi ndezvokuti munhu anonzwisisa angati kune avo, "KUNYANYA KUSAVA. Nguva yangu kuti ndive nemafungiro angu anononoka uye ndiponese hupenyu hwangu! "
Asi kwete ini.
Ndakanzwa ndisina simba uye ndisina tariro.
Handina kumbovhiringidzika kuti ndiramise pa pharmacy uye ndotora mishonga yangu ...
Pane kudaro, ndakarova motokari yaMcDonald-uye ndakatora zvokudya zvakakwana kuti ndigodze bhiza. Zvadaro ndakaenda kumusha ndikazviwisira pasi pamubhedha, kuti ndipfekedze chiso changu uye ndoenda kunze pamberi peTV. Vana vaive kuchikoro, uye mudzimai wangu akanga ari kushanda. Ndaizove nemaawa mashoma kuti ndiende mugare musati vasvika ...
Asi ndinofungidzira ndaidya ndoga muchinguva chekudya ... nokuti chinhu chinotevera ndaiziva, ndakanga ndichimutswa kubva pakarara kwangu nenzwi rakatsamwa remudzimai wangu, Darlene.
Akange akamira pamusoro pangu. Ndakatema zvinyorwa zvangu muruoko rwake.
Anopenga, iye anofanira kunge akazviwana muhombodo yangu ...
"Ted, Uri kuitei iwe pachako?" Akadanidzira. "Ndinofungidzira handifaniri kubvunza kuti chirongwa chako chiremba chaenda sei - mishonga iyi ndeyekurwisa kweropa uye chirwere cheshuga!"
Ndakasundira mabhokisi makuru maBac mac asina chinhu kubva pachifuva changu, ndikapukuta chokoti yekrikiti kubva mumuromo wangu, ndikamudzosera kwaari mukukanganisa ...
"Hazvibatsiri pane izvi. Ndiri kuzofa ndiri muduku uye ndakakora, zvakafanana nababa vangu. Tinogonawo kubvuma, uye ini ndichanakidzwa nenguva yandakasiya. "
Ndiko kwandakanzwa inzwi re mwanasikana wangu ane makore matanhatu, Annabelle ...
"Baba ... muchafa?"
Ndakatarisa. Annabelle akanga akamira pamusuwo, achibatanidza bere rake duku.
mafuta kurasikirwa kudya
Uye pandakaona kutya kwaitarisa chiso chake, uye misodzi mumeso ake ...
Mumakore angu ose ekunyadziswa uye kunyara pamusoro pangu ... hapana chakabvarura mwoyo wangu kunze sokunzwa mwana wangu musikana anotaura izvozvo kwandiri.
Mangwana akatevera, mudzimai wangu akandiudza kuti aizotora vana ndokugara kumba kwehanzvadzi yake kwechinguva. Akange asingakwanisi kutakura kuti vose vaone kuti ndizviuraye zvakare.
Uye saka vakaenda. Uye ndakapedza mazuva maviri akatevera ndiri pamubhedha, ndichizununguka munhamo yangu ...
Chii chakanga chandinofanira kuita, dhonzai whale-yakakura butt kumitambo yejimini uye ubatanidze aerobics class?
Vose vangaseka ini , sevana vakadzokera muchikoro chekurovedza ... kana ini ndisina kufa nekunyadziswa, dambudziko pamwoyo wangu raizove rakaputika sebhokisi ...
Uye ndakanga ndisingakwanisi kurarama pane mashizha uye majiroji, kana chipi zvacho chekupedzisira "chishamiso chokudya chemwedzi" chaiti kuita ...
Ndakanga ndatoedza zvose zvekudya, uye vakandiita zvakasuruvarisa, uye zvakashata kuti ndive pedyo, mhuri yangu ingadai iri nani kunze kwangu ...
Asi iniwo ndaiziva zvimwe zvakare: Ndaive nekwanika. Ndakanga ndarwara nokureva nhema kwandiri.
Vanorwara pakuita zvikonzero. Kurwara kwekuita semunhu akabatwa.
Uye husiku ihwohwo, sezvandinovata pamubhedha ... ndiri ndoga ... ndichizviputira mubhishi re ice cream uye nechitini-kufamba ...
Mhinduro yacho yakawana ME!
Yaiva imwe yeawo mhiri kwemashoko ezvenhau. Mumwe mutori wenhau aibvunzurudza mumwe chiremba, akachenjera-anotarisa akachenjera kubva kuSwitzerland ane ndebvu refu yemvere ndebvu ...
Uye aive achitaura kuti kliniki yake yainge yaita sei zvitsva, kutsvaga kutsvakurudza kuti nei vanhu vane simba kudarika vaine nguva yakaoma zvakadaro kukura.
Hazvive nechokuita ne " kuda " kwako ... Hazvive nechokuita nesu " simbe " ...
Ndizvo zvekuti uropi hwako hwaenda HAYWIRE nokuti wave uchidya nzira isina kururama kwenguva refu ... Uye ikozvino, uropi hwako huri kutumira zviratidzo zvisina kunaka kumudumbu mako.
Ndichakuchengetedzai zvose zvesayenzi zvaaive achikandira pamusoro. Chinokosha ndeichi: fungidzira iwe uri motokari, uye "gaji yako yegesi" iri kuudza uropi hwako kuti uri "usina chinhu" nguva dzose ... kunyange iwe hausi chaizvo ...
Zvechokwadi, kunyange kana iwe uine tangi yakazara, BRAIN yako inofunga kuti uri kutsika-saka inokuudza kuti iwe unoda kudya zvimwe zvakawanda kuti ugare uri mupenyu.
Ichi ndicho chikonzero iwe unowana izvo zvido ... uye ndicho chikonzero iwe unofarira kudya kweBAD, uye unofarira iyo yakawanda kupfuura vamwe vanhu. Nokuti izvi ndizvo izvo muviri wako unoshandiswa. Uye uropi hwako hunofunga, izvo zvakashata zvokudya "gasi."
Kunyangwe kana dumbu rako rakazara, uropi hwako hunoramba huchikuudza kuti unoda PLAY yakawanda. Saka iwe unoramba uchimira gasi, uye pakupedzisira iwe unotanga kuzadza mapeji emagetsi uye uaachengetedze mubako rako, nokuti uropi hwako hunofunga kuti unogona kubuda chero nguva.
Uye zvino chiremba weSwitzerland akati chimwe chinhu chakange chakaita kuti ndidonhedze Doritos yangu ...
Akati mamwe ekutsvakurudza kunotsvaga mune izvo zvinoshamisa zvakawanikwa zvakanga zvichienderera kuYunivhesiti inongova maawa mashoma 'motokari kubva mumba mangu ...
Saka zuva rakatevera, ndakazvipinza mumotokari yangu ndikaita rwendo ...
Uye ipapo ndakapedza maawa akawanda muraibhurari yezvechiremba yemusasa, ndichigara kusvikira usiku sezvo ndakachera mune zvidzidzo zvisingagumi uye mabhuku ekutsvakurudza ...
Ndakawana nyanzvi yekuneta zvakadanwa yainzi Dr. Louis Aronne, Mutungamiri weComprehensive Weight-Control Program paNew York-Presbyterian Hospital / Weill Cornell Medical Center ...
Uye akatsigira zvakataurwa nachiremba weSwitzerland. Chikonzero nei vamwe vanhu vachiona kuti hazvigoneki kuderedza uremu, pasinei nekuedza marudzi ose ezvokudya uye maitiro ekurovedza muviri, ndeyekuti mushure memakore ekudya - uye kudya kwekudya - izvo zvekudya zvekuMadokero zvinowanzochinja huropi hwako.
Kutaura zvakananga, kudya kwekuMadokero kwawakave kuri hupenyu hwako hwose kunokuvadza nzira yekucherechedza mu hypothalamus, iyo inhengo yehuropi yako inotarisa yako metabolism.
Saka ndakaramba ndichichera, ndichidzika zvakadzika uye zvakadzika pasi pembiru ... Uye zvino pandakawana kuongorora kwepasi kwakabudiswa muBritish Journal of Nutrition, iyo yakanga isati yamboziviswa muU.SA.
Ndakadzidza kuti boka reasayendisiti paYunivhesiti yeLiverpool raona kuti kudya kwekuMadokero kunowanzoita kuti mhepo ishandiswe "chain ".
Izvi zvinoreva uropi hwako hunotanga kukunyengedza nemasikirwe akasiyana-siyana ...
Iwe unofunga kuti une nzara uye iwe unotya mafuta, yakakwirira-carb, kana iwe usingadi iwe zvachose ...
Nokufamba kwenguva, kudya kwako kunowanzokonzera mitsipa iyo inofambisa zviratidzo mukati mako mu hypothalamus yako. Izvi zvinoparadza kukwanisa kwemuviri wako kuti utonge uremu hwako uye mastabolism ...
Uye ikozvino, muviri wako uri mukusingaperi we "fat storage" mode pane mafuta BURNING mode!
Mharidzo uropi hwako hukutumira iwe pamusoro pekudya kwako uye nzara yako yose yakasanganiswa ...
Kana uzere, uropi hwako hunokuudza kuti udye zvakawanda.
Uye apo muviri wako unofanirwa kupisa makori, uropi hwako huri kuudza kuti TARIRA iyo makoriro seana mafuta.
Mashoko akanaka ndeokuti, pane nzira yekugadzirisa "kusagadzikana kwemagetsi" uye kuisa ubongo hwako zvakananga ...
Nokudaro kuti STOPS inoshanda kukurwisana newe, uye inotanga kushanda YAKO iwe ... kutumira muviri wako zviratidzo ZVAKANAKA, pane kutumira zviratidzo zvinokuchengetedza mafuta uye kukuita kuti uwedzere ...
Zvechokwadi, pane imwe yehutema yakanyunguduka yakawanda inogona kushandiswa iwe unogona kushandisa, kuchinja muviri wako kubva ku "kusvibiswa kwemagetsi" kusvika "kushandiswa kwemagetsi".
Saka izvo zvinotangira nhasi, iwe uchasvibisa fara, kupisa mapaundi ako okuwedzera, uye kupedza dumbu rako kunyange iwe uchirara ...
Pasina CHIMWE basa rakaoma rinodikanwa.
Pari zvino, iwe unogona kuva nemafungiro akafanana andaive nawo, sezvo ini ndakagadzira kuwanikwa kunoshamisa ...
"Nei mafuta aya asinganyengedzi kudzidziswa nachiremba wose, uye akanyorwa pamusoro pezvinyorwa zvinorema uye magazini eutano?"
Chikonzero chacho chiri nyore:
Imari inosvika $ 60 biliyoni yekurasikirwa kwemari inopa mari yakawanda kuitira kuti chokwadi ichi chirambe chakavigwa.
Kutaura zvazviri, ndakaona kuti mamwe emanyunivhesiti aya akamboita zvidzidzo pamusoro pekusagadzikana kwemagetsi ...
Uyewo gamuchira mamiriyoni emadhora muzvipo uye zvipo kubva kumakambani makuru eFarma - izvo zvinotengesa kuora muviri mapiritsi, chirwere cheshuga uye kuwedzerwa kwemishonga yeropa, pamwe nemhando dzose dzemishonga yaunoda nekuda kwekuwedzeresa.
Kana ava vanotsvakurudza nemayunivhesiti vachida kuramba vari mubhadharo guru reParamma, zviri mubatsiro razvo kuti varambe vachitsvakurudza pasi pezvinyorwa ... saka Big Pharma inogona kuramba ichikupai mapiritsi uye kuve nefuma pamari yako.
Ndakawana pfuma yezvivimbiso zvekare -zvisati zvave zvaratidzwa muchitsime cheyunivhesiti iyo ... asi ivo HAVAKAZI kubudiswa pachena, uye zvino iwe unoziva chikonzero.
Ndakanga ndakagadzirira kuisa izvo zvandakadzidza kuedza ...
Saka ndakatsaurira mwedzi mishoma inotevera kune imwe chinangwa ...
Kuderedza uremu uye kuchinja mararamiro angu 2 Chirwere cheshuga uye kuwedzerwa kweropa.
Uye ndaienda kuzozviita ndisingaendi pane zvinodyisa, uye ndisingapedza maawa akawanda ndichikwira pamapurisa uye ndichishandisa hafu yekufa ...
Sezvo mapaundi akatanga kutungunuka , uye simba rangu nekugutsikana zvakadzoka, ndakatanga kuona ...
Kubvira pazuva ratakaberekerwa, takanyengerwa pamusoro pezvinodiwa kuti tirasike muviri uye tizvichengete.
Ichi ndicho chikonzero kana iwe uwandisa kupfuura ikozvino, kana kutakura mamwe mafuta akaomeswa munzvimbo dzakaipa, haisi mhosva yako.
Pane mashoko akawanda anopikisana kunze uko iwe hauzivi kuti ndiani angavimba uye kuti chii chaunotenda zvakare.
Kunyanya kuipa, zvakawanda zve "mazano" kunze uko kubva kune avo vanonzi nyanzvi ndeyechokwadi ZVINOKOSHA kana zvasvika pakurasikirwa uye kuramba uchikodzera, utano hwakanaka uye uchifara.
Haisi kungokubatsira chete, iyo inokuita kuti uwane uremu uye unowedzera kukwegura kwekuita!
Nokukurumidza, ndakanga ndabva pakuona sezvizvi:
Uye sezvo ndakafara sezvandakaita apo pandakaona zvigumisiro zvangu muchionioni mangwanani oga oga, handigoni kutanga kutondedzera mufaro wandinonzwa, ndichiziva kuti mhuri yangu yakanga yava kuzvikudza, sezvandakanga ndiri ndoga.
Ndakaratidza mudzimai wangu Darlene zvakavanzika zvehutu hwehutu, uye akashandisa iyo kurasikirwa nemapirogiramu makumi manomwe mumwedzi umwe ...
Ndakazviudza nehama dzangu ... uye ivo, zvakare, vakanyunguduka pamapiro zana zana pamwe chete.
Ndakatumira mapepa ekureruka kwekureruka rwendo rwandakaona peji Facebook, uye pandakaenda kuhutachiona, ndakangoerekana ndava nevarume nevakadzi vanobva kune dzimwe nzvimbo pasi rose kunditumira "shamwari dzekumbira" uye kundikumbira kuti ndivanze ...
Saka ndakagovana mazano mashomanana navo, uye munguva pfupi ivo vakanga vachinditumira ivo vasati vadzoka nemifananidzo uye vachigovera nyaya dzavo dzekubudirira ...
Iyi ndiyo apo ndakasarudza kubatanidza mwedzi yangu yese yekutsvakurudza uye dhenda mune imwe iri nyore, nhanho-ne-gadziriro inoita chimwe chinhu, uye chimwe chinhu chete ...
Sungunusa mafuta ako uye upise mapaundi akawanda sezvaunoda, FAST.
Mumwe mukadzi, Jane S. kubva kuSarosota, Florida, akamutumira mberi-uye-mberi mufananidzo pane peji yangu Facebook, pamwe nemharidzo iyi:
Ndiyo apo mudzimai wangu Darlene anotanga kuseka achinditi "Mr. Kwete-Nesenzi, "uye ndinofungidzira iwe unogona kuti yakava zita rangu rezita ... iye, handina hanya ... zvechokwadi inorova vanhu vanondidana" Teddy Bear "kana" Tubby Ted, "iwe haungati here?
Pane imwe nguva ini ndakatanga kuisa yangu yeNonsense Fat Melting System yakawanikwa kuvanhu, maitiro ekutsvaga uye mifananidzo inoshamisa yakaramba ichidururira ...
Vose zvavo vakakwanisa kuwana mitezo inoshamisa kuburikidza nokutora izvi zvakatendeseka, "pasina matsi" kusvika pakurasika.
Ndichitarisa kumashure kwenyaya yangu, zvakaoma kufungidzira kuti gore rimwe chete rakapfuura, ndakanga ndakabatwa pamubhedha wangu ndichinzwira tsitsi ini, pamucheto wemudzimai wangu achindisiya ...
Uye kana iwe uchinditarisa ikozvino, zvakatoomera kuti nditende kuti ndaive nemapirogiramu anopfuura zana.
Asi ini handisisiri munhu anorwara.
Iye zvino ndinoona hupenyu kubva maonero akasiyana zvakasiyana ...
Nokuti pamwe pamwe nedumbu rangu guru, risina kunaka, chirwere changu chechirwere cheshuga neHigh Blood Pressure chave chaenda kwemwedzi inopfuura mitanhatu ikozvino.
Vadzidzi vangu vari kutarisa uye vanonzwa vakashamisika, zvakare, sezvaunogona kuona:
Kunyange kana iwe uri wakasviba zvikuru.
Iye zvino ndiyo nguva yako ...
Ndinodana kuti The No Nonsense Fat Melting System ...
Uye ndiyo chete nzira kunze uko inoratidzira humwe hunyengeri hunoshandura muviri wako kubva "kusagadzikana kwemagetsi" kune "kushandiswa kwehutano hwemagetsi."
Ichi chakavanzika chinonyanya kunyausa chinoshandiswa nesayenzi kuti chinopisa mafuta kubva mumuviri wako iwe uchirara, kuitira kuti iwe usangomuka zvakare, asi uzere nesimba uye hutano hwausina kunzwa mumakore, pamwe nemakumi emakore.
Uye kana iwe uchifunga kuti izvi zvichava zvakaoma, funga zvakare ...
Nokuti ndakabuda kunze kwenzira yangu kuti ndigadzirire sarudzo iyi kune ani zvake asina nguva kana kufarira kushanda kwemaawa masikati, kana kuita chero chimwe chinhu kuti aparadze mararamiro avo.
Nditendei, sine simba uye ndakakodzera sezvandiri kutarisa, handisi MUFANZI mukuru wekuvhima. Saka ndinoenda kuzoita kuti tive nechokwadi chokuti tinozvichengeta zvishoma nezvishoma, tichiri kukuwanai zvigumisiro zvepamusoro.
Fungidzira kutendeuka pamushure mokunge uchinge wapedza chikoro chekudzoka zvakare, kana mhuri yako inotevera isangana pamwe chete ... uye kuva navo vachikumbirai chakavanzika chako ...
Chimbofungidzira kuti unofadza sei unonzwa uchiziva kuti zvose zvehutano hwako huunzwa kuburikidza nokurema kwako zvose zvakasara ...
Uye iyo ndiyo kutanga kwekushamisa kwehupenyu hwako hutsva, kana iwe ukaedza "nzira yangu ine usimbe" yekuderedza uremu .... Uye zvizhinji zvayo.
Chinhu chose chaunoda kuziva kuti chizora mafuta kubva mumuviri wako FAST iri mukati mharaunda ye digital, iyo iwe unogona kuona pakarepo pamakombiyuta yako, smartphone kana tablet.
Parizvino, ino Nesenseense Fat Mushonga System yakabatsira mamwe varume nevakadzi makumi maviri nezvitanhatu. Uye varume vavo, madzimai uye nhengo dzemhuri vakaita sekutenda sezvavari.
Kana izvi zvisina kunaka zvakakwana kwauri, zvino dzokera kuhomwe yako yeDoritos uye zviratidzo zvako zvepfungwa zvisingafungi, nokuti hapana munhu-kwete ini, kana ani zvake-achakwanisa kukubatsira.
Asi isu tose tinoziva, iwe unoda kuva wehupenyu hwangu hunotevera. Iwe unoda kubatana nezviuru zvevarume nevakadzi vemazera ose, kubva kumativi ose enyika, avo vakawana migumisiro inoshamisa kubva kune iri dhi-yakafa nyore nyore system.
Nenzira, avo vaiva vanhu vakaedza "beta" version ...
Kubvira ipapo, izvi zviri nyore-kushandisa-digital system yakagadziridzwa uye yakagadziridzwa nemamwe mazano uye mazano okuita kuti zvive nyore nyore kupisa mafuta, kuitira kuti iwe unofanirwa kuva wakakwana slug kuti urege kurasa uremu nawo.
Ndiyo 100% "munhu ane usimbe" ane ushamwari ...
Nokuti iyi ndiyo imwe nzira ichakubata iwe neruoko uye kukufamba iwe kuburikidza nematanho, kuitira kuti panguva dzokuti uise maoko ako pairi, iwe uchakwanisa kuchinja uremu hwehutano hwako uye utange kuwana muviri wawave nguva dzose aifunga nezve ...
Sezvo iwe usingagoni kusvibisa iyo maundi mapaundi kunyange iwe uchirara!
Uye kuti uve nechokwadi chokuti kubudirira kwako kune chokwadi , iwe unogona kutitaurira chero nguva ipi zvayo yaunoda kubvunza mubvunzo pamusoro penyaya, kana nezvemamiriro ako ega.
Icho chiri chaicho chiri chidimbu chechando. Pamusana pekukwanisa kwekanguva, ndinogona kukuudza nezve 10% zvezvaunowana mukati mezvese system ...
Iyo yakaongororwa uye yakarongwa neMM MD inoremekedzwa zvikuru, uye inosanganisirawo mazano kubva kune rumwe rutivi rwehumwe kurasikirwa kwekurema uye nyanzvi dzehutano.
Iwe unofanirwawo kuziva kuti kunyange zvazvo ichi chiri chigadzirwa chitsva, hausi guinea yenguruve. Ndisati ndanyora iyi mharidzo, takatotadza kubata varume nevakadzi vanopfuura 16 300 kubva kumativi ose enyika.
Wakafukidzira iwe, iwe uri murume kana mukadzi, uye hazvinei pasinei nezera rako ...
Uye chikonzero cheizvi chiri nyore ...
Izvozvi Hapana Nonsense Fat Kusungiridza System inogadzirisa dambudziko rako pamutambo wepamusoro.
Haisi kuronga kwenguva pfupi kana "rubatsiro rwebato ..."
Kana uchinge uine uremu hunochinja, huchaparadzwa zvachose.
Kwete kanas, buts kana maybes.
Munguva pfupi, iwe uchange uine rusununguko , kunyadziswa, kushungurudzika uye kuzvidzora kwekuzvipira kunouya pamwe nezvose zvinorema zvakanyanya iwe uri kukurudzira zvakapoteredza ...
Nokukurumidza iwe uchakwanisa kumira uchizvikudza, wakakura uye unovimba ... nokuti hausi iwe chete unocherechedza kunaka kwako kutarisa ...
Vamwe vanhu ikozvino vakatarisa iwe nekuyemura uye kunyange godo, uye uchida VAKAZIVA chakavanzika chako chinokanganisa mafuta ...
Uye iwe hauzomboperi semuranda weBrama Pharma, yakagadzirirwa kuwedzerwa kweropa uye chirwere cheshuga nokuti uremu hwako huri kutambura nehutano hwehutano ...
Uye iyo inongova humwe hutano hwehutano hwaunofanira kutarisana nayo iwe usingazivi zvakavanzika izvi zvakavanzika.
Kunyanya kukura kune imwe yezvikonzero zvinokonzera kusagadzikana kwepabonde uye kurasikirwa kwebhabido kwevarume nevakadzi ... izvo zvinogona kuparadza ukama uye kuputsa mhuri.
Iwe zvino unonzwisisa kuti iwe uri mukutonga kwehupenyu hwako pachako ... Uye iwe wava kuda kunzwa manzwiro ehurukuro itsva. Nokuti, kubva zuva ranhasi zvichienda mberi, hakuzovi nomumwe anozogadzirisa zvinoitika muupenyu hwako asi iwe.
Izvozvo hazvingavi chinhu chinoshamisa here?
Panzvimbo pekunyadziswa, kushungurudzika uye kunyanya kunzwa kunzwa wakaneta uye wapera simba iwe uri kunzwa iye ikozvino?
Iwe unoziva iwe unofanirwa nani pane izvi ... uye saka ita vadiwa vako. Vanokuda iwe pane zvaunogona. Kwete kuti uri kuratidza sei ikozvino.
Uye ini ndinogona kukuvimbisa iwe, kana iwe usingaiti ikozvino uye uone izvi zvose-chaiye Fat Melting System, inongova nyaya yenguva isati yatanga mamwe madhimoni-madhimoni anokonzera hupenyu hwako pfupi ...
Madhimoni seShiabhesi ...
Uye iyo ichangotangira ...
Usingarevi matambudziko makuru emari madhimoni aya acharwisa mhuri yako ...
Iwe une zviratidzo zvemari yakawedzerwa yakarongedzwa, kuti uone kuti unogona kuvhara mabhizimisi makuru ezvokurapa iwe uchakurumidza kubhadhara, kana usingatori matanho?
Iwe unoda kuparadza nguva yakawanda sei nekurapa zviratidzo zvekuwedzeredza, apo iwe unogona kuporesa dambudziko guru nekudzosa zvose zvehutano hwako nekudzorera muviri wako, hutano uye kuvimba - kamwe chete?
Kana iwe usaora ichi kugadziriswa, kumwe pasi mutsetse ... Zvingatiomera mangoti mangwana, kana mumakore 10 'nguva ... unenge avete pamubhedha muchipatara aine sepombi muchibudisira pakati penyu, uye mwoyo muchina muropa kusvika muchipfuva chako, paunenge ndinototsvaka vanotama panguva pasirin'i ...
Nenhengo dzemhuri yako amire pamusoro pako, kutya uye ainetseka achirwara ...
Chii chichakurukurwa achimhanya kuburikidza musoro wako zvino?
Zvakadzama pasi mukati, kana uchida kubvuma izvozvo kana kwete, munoziva kuva mafuta yekudyidzana zvinowedzera mikana vamwe anotyisa chirwere kana mwoyo kurwiswa pakarepo achirova iwe pasi ...
Ndinoziva kuti kana yangu, mumwe pfungwa zvisanditsamwisa kupfuura yaiva mumwe wangu ane kuenda tsvaka mumwe, kuti ini kutsiva mushure mekunge ndaenda ...
Uye vana vangu achikura pamwe nevamwe baba, kana kwete baba zvachose ...
Uye kana vadiwa vako vane kufamba mberi, imi kamwe uri waenda, anogona here mhosva?
Kunyanya kana uchiziva unogona kwakatadzisa zvose izvi, dai bedzi vakaedza ichi No maturo Fat utsotso System nhasi?
Ngatimbotaurei zvazviri, ari mafuta haisi dambudziko diki unokwanisa nehanya, uye chete tariro nayo "anoenda kure."
The chikuru wako muchiuno mutsetse, yakawanda matambudziko uchazova zvakatarisana ...
Kana musingadi chiito, aigona zvakanaka mari iwe utano hwako, hwako pabonde upenyu, ramangwana zvemari yako, muchato wako, mhuri yako, uye zvose iwe aidaro ...
Ndicho chikonzero kana uchitarisa mari inowanikwa NOT kutora matanho, zvinogona zvachose achisiririsa ... mumuviri, mupfungwa uye mune zvemari.
Kuvimba neni ndava nomushangu dzenyu ... ndakange mafuta, uye ndinoziva tsoziva waunonzwa ... It kunotambudza chivimbo chako ... It hunoparadza renyu nokuzviremekedza ...
Iwe kudzivisa mamiriro ezvinhu kuti unzwe kusagadzikana, uye kurega kurarama upenyu zvaunoda. muviri wako anova mutirongo yenyu ... rokudzora iwe kuwana, duku mutirongo yenyu yava. Ndaivapo ... ndakadzidza nenzira yakaoma ... uye ndaitosvika akabhadhara pakupedzisira mutengo.
Munoziva yangu zvakaitika kundorwisa "kufutisa dhimoni," uye chii ndaifanira kuenda kuburikidza nechokwadi chokuti murege kutambudzika kuti dambudziko ...
Uye ndinoziva akazvionera kuti kungoedza "kubata" zviratidzo chete kunowedzera kurwadziwa.
Saka regai kukubvunza mubvunzo chakakomba ...
Imhandoi ukoshi kuti iwe pachigaro nzira zvichanyunguduka kure mafuta ako zvachose, nokudzosa chivimbo chako, uye kukupa chaizvoizvo kunoguma sezvo shoma sezvo 7 days?
Ndinoziva yakawanda yevarume nevakadzi angafara kubhadhara uwane ropafadzo ...
Uye chimbofunga nezvenguva uye mari ungadaro kare apambadzwa pamusoro "chishamiso mapiritsi," kwechokwadi zvokudya, kurovedza midziyo, pachake vanodzidzisa yokurovedza muviri memberships, kana dzimwe nzira kuti kuderedza uremu kuti haana kukupai zvabuda vakavimbisei.
Pashure kushandisa kwangu nyore No-maturo Fat utsotso System , ndakava vadzidzi ndiudzei vangadai vabhadhara inopfuura $ 1.997 chete kuti vawane ruzivo urwu budiriro ...
Asi mashoko akanaka, handisi vamwe vanokara Big Pharma CEO uyo chete hanya lining muhomwe yake. Ndinongova avhareji munhu akafanana newe. Ndinoziva zvauri kuenda kuburikidza ...
Musiyano uripo badzi, ndakanga rombo zvokuti dzagumburwa chakavanzika yaindibvumira kuziva izvi "nzira usimbe" kupisa mafuta nokukurumidza uye zvose-wakasununguka.
Saka handisi kukubvunza kubhadhara $ 1.997.
Hakuzovi $ 997. Zvichava kunyange kuva $ 197.
Chete mubhizimisi rako nhasi iri imwe nguva chete, zvakazara refundable dhipoziti nekuda mari unoona pazasi vhidhiyo. Ndinoda ndangodzidza kuti kupa izvi for free, asi ndapota kunzwisisa ini panhongonya uye mari zvandinoda mari, kuchengeta website iyi paIndaneti ...
Uye Website yangu mari vari achikura mwedzi wose, sezvo zviuru varume nevakadzi anowana nzvimbo iyi zuva nezuva ... I vanofanirawo kubhadhara noushamwari Customer Support chikwata chedu kuti iripo kukubatsira maawa pazuva 24, mazuva manomwe pavhiki.
Asi zvandiri kukumbira iwe zvechokwadi chete refundable dhipoziti ...
Nokuti chiitiko kashoma kuti hausi zvoupengo chaizvo nemigumisiro unokwanisa kubva wangu No-maturo Fat utsotso System, mumwe-nguva dhipoziti yako 100% refundable.
Unogona paemail noushamwari Customer Support chikwata changu, uye kuwana sendi ose shure chero nguva pamusoro inotevera 60 mazuva.
I vanokurudzira kuti iwe kuwana hurongwa, Rova zvakasimba zvakavanzika, uye kusarudza kana uchida rako refundable dhipoziti shure. Une azere mazuva 60 kuita kudaro.
Sezvaunogona kuona, ndava akabvisa zvose ngozi kubva kwauri uye akariisa pamusoro pachake pamapfudzi angu ... saka iko zvino, pane zvachose pasina chikonzero haana kupa uyu wekuedza.
Yeuka, chete kana ukasarudza unoda dhipoziti kwako shure, nokuti chipi chikonzero, zvose zvaunofanira kuita titumirei email. Muchaona sei kutaura kwedu Customer Support chikwata kamwe iwe kupinda Members yedu Area uye kuwana kuwana hurongwa.
Saka munoona, Ndinonzwa kwete jerk ungadaro akafunga ndakanga apo iwe akatanga kuverenga page.I'm ichi chete "hapana musoro" mhando mukomana ari rwakazvitsaurira kuwana imi zvabuda.
Asi ini ndinoti kuti zvakadaro kure, vanhu vashoma chaizvo wakazvikumbirira dhipoziti kwavo shure. Asi, tiri kuwana na ose zuva kubva varume nevakadzi vemazera ose vanoda isu tinotenda.
Pari, tiri kuchinja upenyu hwevanhu vanopfuura 383 rimwe zuva, pasi rose ...
Saka chete kuisa iwe zvachose vakasununguka uye kuti ichi chinhu pasina-brainer, pano redu Iron-vakapfeka, 100% Money Back Guarantee:
Kana hwangu No-maturo Fat utsotso System haakupi hombe, tinoshandurwa kuchinja upenyu-kuti zvaunoda uye vakakodzerwa ...
Uye ndiri kutaura pamusoro kungopa paundi kana maviri, ndiri kutaura nezvorudzi kuchinja shamwari dzako, co-vashandi uye vomumhuri anokukumbira SEI makazviitira ...
Ndakabva vanosimbirira kuti iwe paemail yangu 24-awa Customer Support chikwata chero nguva pamusoro akatevera 60 mazuva, uye kumbira kuti dhipoziti wako vakadzoka zvakazara. Uchafarirwa. nayo, nekobiri rimwe, pasina anomubvunza mibvunzo.
Chingorangarirai - une yose mwedzi miviri, kana wenguva 60 mazuva, kukumbira dhipoziti wako kuti adzoka.
Zvino, sezvo wakamborara vakatarisa ichi kure, ndinoziva kuti uchida chaizvo. Uri kuda kuita ...
Saka regai sweeten ichocho nokukupai zvinotevera "Fast Action Bonuses" kana ukaedza wangu No-maturo Fat utsotso System nhasi:
Fast Action bhonasi # 1 -
The "Belly Flab No More" Exclusive Report (A $ 47 Kukosha)
ukoshi pamu ichi, hapana-Zvinhu Zvisina Basa mushumo unoratidza iwe chaizvo zvaunofanira kuita kuti vapise zvakanangwa dumbu mafuta kumativi enyu nemakore chikamu.
Just munyeverwe, tava yakagamuchira mishumo kubva vadzidzi kuti chete vazhinji zvakavanzika iyi bhonasi gwaro iri zvakakwana kuti ako bhurukwa "wekare" chaizvoizvo idonhe muchiuno chenyu, nekuti unenge kubvunda kure dumbu mafuta nekukurumidza kudaro ...
Saka iva nechokwadi wagadzirira kutanga kunotenga mbatya itsva!
Next, ndava kukupa ...
Fast Action bhonasi # 2 -
The "Instant Metabolic Galvanzie" Insiders Report (A $ 97 Kukosha)
Ko munoziva pane "mafuta unopfuta chinja" mukati muviri wako izvozvi - kuti akatendeuka kure? Regai ndikuratidzei kuti pakarepo chinja nayo shure, saka unogona supercharge kwako uremu kuedza.
Kamwe iwe kuona sei Activate wako mafuta ichipfuta chinja, muviri wako achaita rikurumidze kuti kunyange LEVEL uye uchafarirwa. mafuta-utsotso zvabuda kunyange nokukurumidza.
Uye kwete kuti ndicho zvose. Muenderere zvakare kuwana ...
Fast Action bhonasi # 3 -
The "Five Minute Fat Buster Series" (A $ 177 Kukosha)
Zvino tarirai, uchazova kunakidzwa kunoshamisa uremu zvabuda chete nokushandisa huru maitiro, uye kana ndikati paiva razero kuedza zvinobatanidzwa, I airevesa ...
Asi kana musingadi nezveimwe achipedza maminitsi mashoma pazuva achiita zvimwe nyore asi super-vanobudirira muviri, unogona mhanyisa results oshandura flab wako rakaonda, seksikäs tsandanyama.
Inside ichi chete vhidhiyo series, izvo unogona chete kuwana nokuedza kwangu No maturo Fat utsotso System nhasi, uchafarirwa. nokukurumidza uye nyore yemaminitsi mashanu mafuta busting Muchiitwa unogona kuita ichinyaradzwa kumba kwako.
Saka regai akuyeudzirei wakasununguka mamwe bonuses uchazova pakarepo kugamuchira kana ukaedza dzangu No maturo Fat utsotso System nhasi:
The " Belly Flab No More " Exclusive Report (A $ 47 Kukosha)
The " Instant Metabolic Galvanzie " Insiders Report (A $ 97 Kukosha)
Uye The " Zvishanu Minute Fat Buster " Video Series (A $ 177 Kukosha.)
Ndizvo $ 321,00 zvemadhenari mamwe ukoshi uri kuwana paunopa yangu No maturo Fat utsotso System ane wekuedza nhasi, zvachose ngozi-free.
Rangarirai, ichi ndicho chete maitiro kunze uko kuti runotibatsira pondo yenyu uye kudzokera matenda ako uremu-chokuita zvachose, kuburikidza kurwisa dambudziko panguva paro.
Uye chiitiko ukasarudza kukumbira dhipoziti wako kuti adzoka, iwe unenge ACHIRI kuwana kuchengeta No maturo Fat utsotso System, pamwe ose bonuses.
Ndicho muduku chandingakuitira, kukutendai kuona vhidhiyo iyi uye kupa uyu wekuedza.
Saka endai mberi. Tinya "Wedzerai To yekutengera" bhatani pazasi. Hazvina basa kana zviri zvitatu mangwanani - kamwe iwe baya kuti bhatani, unenge kutorwa redu akachengeteka Checkout Page, apo uchawana kuzadza kubva kukurumidza chimiro. It mukatora 30 wechipiri, misoro.
Ehe! $ Chete 37 - With A Full 100% Mari Back Guarantee!
GET RAVA ACCESS, MAZUVA 365 PAGORE, 24HOURS RIMWE ZUVA!
Your muripo mashoko uye zvemunhu ngauitwe hazviudzwe, nekuti ichi Checkout Page ari encrypted pamwe azvino 256-Bit encryption michina.
Uye kudzivirira mberi kwako zvakavanzika, hapana pamusoro No maturo Fat utsotso System achaonekwa pamusoro wako kadhi kana kubhengi mashoko.
Chinhu bedzi icharatidza kumusoro achava mutariri kubva "CLICKBANK," rinova yakachengeteka muripo processor kuti tishandise. (Vakanga dzinoona pamusoro 100,000 yakachengeteka kwema zuva nezuva.)
Asi iwe unofanira kuita ikozvino. Ini nokutendeseka handizivi kuti yakareba Ndinogona kuchengeta mutengo yakaderera ichi ndisati ndiri VASHAIKA mari, kubudikidza Munenge achichipa kure nokuda Chaisadhura ...
Saka zvino yava nguva yokuti tinya "Wedzerai To yekutengera" bhatani pazasi, apedzise Checkout wako papeji inotevera, uye vawane nokukurumidza kuwana yakakwana No maturo Fat utsotso System, uye ndinoiitawo zvose wakasununguka kutsanya-chiito bonuses.
Ndinotarisira kwamuri kuva kwedu kubudirira nyaya inotevera.
Sunungukai mozondiperekedza email uye vanondiudza pamusoro incredible kubudirira mune nayo ...
Just woripa bara, uye ndine chokwadi achachinja hwako nani, kutanga mumasekonzi 60 chete kubva ikozvino.
Saka chii uri kumirira?
Tinya "Wedzerai To yekutengera" bhatani pazasi uye pedzisa Checkout rikurumidze.
It chete Zvinotora mumasekonzi 30 kuzadza fomu papeji inotevera, uye mukati 60 nemasekonzi uchava kwakakwana maitiro, uye vose bonuses, pamberi penyu pamusoro chinovhara yako.
Right zvino, unofanira chaizvoizvo akamuka zvitatu ...
Option 1 - Unogona kuvhara peji ino uye kuramba vachirarama hupenyu hwako senguva dzose, uye vanoramba vasingarangwi senguva zvabuda. More mwoyo, kunyadziswa, kuvhiringidzika uye kutya pamusoro apo utano hwako hunange ...
Zvadaro pane Option 2 - Unogona kushandisa ruzivo waita inowanikwa kubva mharidzo iyi "bapiro nayo" uye edza kufunga izvi pamusoro rwenyu.
Asi regai zvazviri chaizvo: kana uchiziva chaiwo mafuta utsotso chakavanzika kuti mukati ino, hapana chitsama "kutongwa uye kukanganisa" Unoenda kugadzirisa chaiye zvinokonzera nyaya zvachose shure dambudziko rako uremu.
Uye nei waizoda kunyange kuedza uye zvichida kuti dambudziko rako kuipa, kana No maturo Fat utsotso System anobvisa zvose guesswork uye maoko iwe kugadzirisa?
Uye zvino, imi mune Option 3 - Unogona kuedza kudzinga No maturo Fat utsotso System nhasi uye kugadzirisa dambudziko iri kamwe kwenguva dzose kuburikidza kushandisa ichi rupo, shoma-nguva uye zvakazara refundable kupa.
Uchafarirwa. zvakakwana hurongwa, uye ndinoiitawo wakakwana bhonasi pasuru, zvose mumwe pasi, 100% refundable dhipoziti.
Yeuka bonuses pachavo vanokosheswa pa $ 321,00 uye munokosha kupfuura mutengo dhipoziti.
Simply tinya murayiro bhatani pazasi, uye pedzisa cheki dzako rikurumidze.
Yeuka, unokwanisa kuedza ichi nokuda rose kwemazuva ane 60 USATI kusarudza kana uchida kukumbira kwenyu refundable dhipoziti shure.
Kana wakambozvibvunza vakatarisa ichi kure, unofanira kuva nechokwadi chezvinhu zviviri:
Mumwe, imi hamugoni kuuya kumirira mumwe zuva kugadzirisa kwako uremu nyaya uye dzibve kamwe kwenguva dzose. (Zvino Unoda kumirira, kana inotoda kumirira iwe papeji inotevera
uye zviri nyore, wakachengeteka uye zvose-chaivo?)
Vaviri, nekuti chipo ichi mukana isina zvachose, zvinongokonzerwa haana musoro kurega mukana uyu kana kutaurira pachako, "zvichida pashure." Nguva inotevera unoedza kushanyira nzvimbo iyi, mutengo vangadaro katatu kana kunyange akawedzera kakapetwa .
Zvino ndiyo nguva kuti mugowana utano hwako, mufaro uye rusununguko. Tinya "Wedzerai To yekutengera" bhatani pazasi uye mafomu anokurumidza shoma chimiro papeji inotevera. It mukatora mumasekonzi 30, misoro.
Usakanganwa, redu Checkout Page iri 100% ndakachengeteka, uye yenyu mashoko ngauitwe zvachose zvakavanzika.
Kamwe wapedza Checkout yako, kwakakwana No maturo Fat utsotso System, uye ndinoiitawo ose bonuses, vachaparadzwa wakaradzikwa kwamuri pamusoro chidzitiro rako mukati 60 seconds.
Tinya "Wedzerai To yekutengera" pazasi, uye tora matanho iye zvino.
Regai wakamirireiko ...
Zvino ndiyo nguva kutora mutariri uye mugowana mufaro wako rusununguko.
Zvino ndiyo nguva achinje zvechigarire uye kugadzirisa matambudziko ako uremu ...
Uye nokuti iwe kubatana mumapoka ezviuru yedu yevadzidzi vanoonga vari pakupedzisira kukodzera, seksikäs uye kunzwa kukuru!
Saka usanonoka kupfuurira. Tinya "Wedzerai To yekutengera" bhatani pazasi, ngativamukire slag.
TANGA KURASIKIRWA WEIGHT TODAY!
ClickBank ndiye retailer zvibereko izvi. CLICKBANKÂ® ari vakanyoresa vanozivikanwa Click Sales, Inc., mumwe Delaware repamutemo riri pa 917 S. Lusk Street, Suite 200, Boise Idaho, 83706, USA uye anoshandiswa mvumo. ClickBank muMegidho sezvo retailer hariumbi ane tsigiro, mvumo kana kudzokorora chigadzirwa ichi kana kutaura, mashoko kana pfungwa zvaishandiswa kukurudzira chigadzirwa ichi
The Website zviri uye chigadzirwa kutengeswa kunobva pamusoro yemunyori pfungwa uye anopiwa vachingoshandisa ane "AS NDIYE" uye "AS ANOWANIRA" hwaro. Unofanira kuita pachako tsvakurudzo yako asimbise mashoko kumwewo apo kutsvaka mashoko chokuita nenyaya dzoutano uye nguva dzose kudzokorora mashoko nokungwarira yenyu nyanzvi utano Provider asati kushandisa chero protocols akapa website ino uye / kana chigadzirwa kuno . Hapana ClickBank kana munyori vari kuita basa rwokurapa kana akafanana nyanzvi mabasa kana zano Via website iyi kana chigadzirwa, uye mashoko asina chinangwa kutsiva vezvokurapa zano inopiwa chiremba kana zvimwe marezenisi zveutano Provider. Haufaniri construe ClickBank kuti kutengesa chigadzirwa ichi sechinhu tsigiro nokuda ClickBank maonere vakaratidza ino, kana chero garandi kana vimbiso ipi nzira, dzokurumbidza, kurapwa, chiito, kana kushandisa zano chinoitwa munyori chigadzirwa.